Faah faahin:- Weerarkii xalay ee Muqdisho iyo rasaas goos-goos ah oo saakay weli la maqlaayo (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerarkii xalay ee Muqdisho iyo rasaas goos-goos ah oo saakay weli la maqlaayo (SAWIRO)
Weerar ku bilawday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa xalay lagu qaaday Hoteelka Posh Treats iyo maqaayadda Pizza House oo labadoodaba ku yaalla isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, iyadoona weerarkaasi uu xigay rasaas xoogan oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab goobahaasi ku fureen.
Ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan oo markii uu weerarka ka bilawday labadaasi meelood soo gaaray goobahaasi ayaa la sheegayaa inay soo bad-baadiyeen dad badan oo ay ku jiraan Ajaanib u kala dhalatay dalalka Kenya iyo Itoobiya.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa la sheegayaa inay weli ku jiraan maqaayadda Pizza House, iyagoona weli halkaasi ka ridaya rasaas goos-goos ah, waxaana marba marka kasii dambeyso isa soo taraya qasaaraha weerarkaasi ka dhashay.
Illaa 16 qof ayaa haatan la xaqiijiyay inay ku geeriyootay weerarkaasi, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 30 qof kale, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Soomaaliya.
Dadka geeriyooday ayaa la sheegayaa inay ku jiraan dad ajaanib ah, iyadoona tirada dhimashada iyo dhaawacyadda laga yaabo inay intaasi kasii bataan, waxayna ciidamada Gaashaan haatan wadaan sidii ay kusoo afjari lahaayeen howlgalkaan.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay iyaga ka dambeeyaan weerarkaasi lagu kala qaaday Hoteelka Posh Treats iyo maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ciidamada Gaashaan ayaa la sheegayaa inay xalay dileen mid ka mid ah nimankii weerarka soo qaaday, waxaana la sheegayaa in dhowr kale ay weli rasaas kasoo dhex ridayaan maqaayadda Pizza House.
Xaaladda goobta uu weerarka ka bilawday ayaa saakay ah mid aad u kacsan, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in dhowr qofood weli lagu heysto gudaha maqaayadda Pizza House.
Xiriiro kala duwan oo aynu la sameeynay saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in saacadaha soo socdo lasoo gaba-gabeyn doonno howlgalka haatan ka socdo maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho.